5ta Nevados ee ugu muhiimsan Peru | Wararka Safarka
Nevados ee Peru
Mariela Carril | | America, Meelaha Dalxiiska loo tago, Maxaa la arkaa
Dhulku wuxuu leeyahay muuqaal qurux badan oo haddii aan ka fikirno sida ay u sameysmeen, qarniyaal badan, dhaqdhaqaaqyo lama filaan ah oo dilaa ah oo qolof ah iyo taarikada tectonic, xitaa way ka sii yaab badan yihiin.
La Cordillera de los Andes waa mid ka mid ah safafka buuraha ugu cajiibka badan adduunka iyo kii ugu balaadhnaa markaa wuxuu gudbaa astaanta dhowr dal oo Koonfurta Ameerika ah ku soo baraarugay. Mid ka mid ah waddamadaas waa Peru iyo buuraleyda u gaarka ah ee leh barafka daa’imiska ah waxay noqdeen meel loo dalxiis tago oo loogu talo galay buurta ugu fiican. Aan baranno buuraha barafka leh ee Peru.
Buuraha Andes wuxuu qeexayaa hal dhinac oo Kolombiya ah, qayb ka mid ah Venezuela, Ecuador, Bolivia, Peru, Chile iyo Argentina. Celceliska dhererka buuraheeda waa afar kun oo mitir laakiin Aconcagua, oo ah meesha ugu sarreysa ee ugu sarreysa, ee ku taal ciida Arjentina, waxay gaadhaa 6960 mitir oo joog sare sidaa darteed waxay raacdaa isaga xagga Himalayas.
Waxaan dhihi karnaa in Andes ay yihiin saqafka Ameerika mana khaldami karno. Intaa waxaa dheer, waxay kaloo badbaadinaysaa fulkaanaha meelaha ugu sarreeya Dunida iyo safar dhan 7240 kilomitir. Markay soo afjarto socdaalkeedii dheeraa ee xadka Badweynta Baasifigga, waxay ku liqdaa labadaba Koonfurta Koonfurta Atlantik, dhererka Isla de los Estados, iyo, dhinaca kale, waxay ku dhowdahay badda Caribbean-ka.
Khubarada cilmiga dhulka waxay yiraahdaan buurtaan mareykanka ah sameysmay iyadoo dhaqaajineysa saxanka Nazca ee ku taal saxanka Koonfurta Ameerika, dhamaadka Dhamaadka Cretaceous ama Sare Cretaceous, waagii ugu dambeeyay ee Mudadii Cretaceous ee dhammaatay 66 milyan oo sano ka hor. Waxay ahayd dhaqdhaqaaq hoosaad markaa natiijadu waxay tahay in uu jiro dhaqdhaqaaq fulkaaneed dhererkiisa.
Buuraha barafka ee loo yaqaan 'Peru' waxay ku yaalliin bartamaha Andes, waax ay ku jiraan Andes of Bolivia, Argentina, Chile iyo Peru. Inca loogu magac daray ereyga Apus ilaa meelaha ugu sarreeya baraf daa'im ah oo waa iyaga kuwa noqday buur fuula, socod lugeyn iyo ujeedo tacabur.
5 Baraf Xuantsan
Massifkan leh daboolka barafka wuxuu ku jiraa waaxda Ancash, Bartamaha Peru. Aad buu u sarreeyaa markaa dhererkiisu waa 6768 mitir wuxuuna leeyahay wadar oo ah saddex shir oo leh farqi yar oo dherer ah oo u dhexeeya iyaga. Cufnaanta granite ee lagu daboolay dhulka, dhirta iyo barafka waxaa la sameeyay wax ka badan shan milyan oo sano ka hor.
Waa buurta shanaad ee ugu dheer Ameerika Tan iyo markii wax waliba ay yihiin arrimo aragti ah, haddii dhererka ka soo baxa bartamaha dhulka la cabiro, wuxuu noqon lahaa buurta labaad ee adduunka ugu dheer, taas oo ah, ku dhowaad laba kiilomitir in ka badan Mount Everest.
Laba doox oo dhaadheer ayaa ka soocaya buuraha dhexdooda, dooxooyin sida halkan looga yeedhay. Webiga ugu horeeya waxa ku yaal Xadiiqadii qaranka huascaran, oo leh hareeraheeda iyo qaabab dalxiis. Ta labaad ayaa caan ka ah laakiin taasi maahan sababta ay u la'dahay qurux ama diiwaan gelin: Waxay leedahay tunnelka gawaarida adduunka ugu sareeya: 4732 mitir.
Halka mid ka mid ah meelaha ugu sarreeya fuulay xagga sare 1908, waxaana sameysay haweeney Mareykan ah, Annie Peck, meelaha kale ee ugu sareeya waxay kaliya ka heli doonaan booqashada ninka sanadkii 1932dii. waa Hidaha Dunida laga soo bilaabo 1985, oo ah keyd biosphere sababtoo ah lagoonkiisa iyo barafkeeda, oo tiradoodu ku dhowdahay soddon.
Tani waa buur kale oo ka tirsan isla waaxda Peruvian ee Ancash. Cabirrada 5947 mitir ee joogga waana muruq baraf ah iyo dhagax weyn oo dad badan oo takhasus gaar ah u leh cinwaanka la Buurta ugu quruxda badan adduunka.
Waxay umuuqataa Ahraam kaamil ahaanta weyn inkasta oo ayna ahayn bada sare hadana waa qurux badan tahay in faahfaahinta goor dhow la ilaaway. Magaalada ugu dhow ee lagu bilaabayo xiisaha loo qabo ogaanshaha buurtan Peruvian waxay 467 kilomitir u jirtaa Lima waana Caraz.
Ninka reer Galbeedka, weligeen ma ogaan doonno haddii qof intaas ka hor aaday, oo uu gaaray meeshii ugu sarraysay sannadihii 30-aad ee qarnigii labaatanaad. Maanta marinka caadiga ah ee lagu gaarayo meesha ugu sarreysa waa kan ay fureen koox ka mid ah fuulitaanka Talyaaniga afartan sano ka hor, wejiga koonfur-bari. Ma sahlana oo sida ay yiraahdaan, waxay u egtahay Himalayas.
Buurtan barafka leh waxay ku taal illaa 2001 waa aag laga ilaaliyo waaxda Peruvian ee Junín. Waxay leedahay dhowr meelood oo sare kan ugu sarreeyana waa dhererkiisu yahay 5557 mitir halka kan labaadna uu ka hooseeyo 5530 mitir. Goor dambe, sida ugu sarreysa oo leh joog sare lagu daro, dhammaantood waxay ka sarreeyaan shan kun oo mitir. Waa maxay weynaantiisa!
Waxaan ku qeexi karnaa inay tahay buuro yar yar oo laba saacadood uun ku socda baabuur magaalada Huancayo, sideed saacana u jirta Lima. Xerada salka loo fuulo waxay dhererkeedu yahay afar kun oo mitir halkaasna dadka fuula waxay raaci karaan laba waddo.
Buurtan sidoo kale waxaa laga helaa waaxda Ancash iyo qiyaastii 6395 mitir oo joog sare ah. Waxay ku dhex dhuuntaan daruuraha iyo barafka dhexdooda afar sare baraf leh Waxay ku taal waqooyiga Huascarán baraf leh oo buurihu waxay ka yimaadaan dooxada ama durdurka Llanganuco.
Waxay ku dhex jirtaa waaxda loo yaqaan Cordillera Blanca, oo ah buuro kala duwan oo buuro dhaadheer ah oo kaabiga ku haya xeebta galbeed ee Peru qiyaastii 180 kiiloomitir oo gudaha gudihiisa, sida maalka oo kale, ay jiraan in ka badan lix boqol oo baraf, qaar badan oo baraf dedan oo badanna in ka badan shan mitir oo joog sare, boqolaal harooyinka iyo tobanaan wabi.
Sidoo kale waa mid ka mid ah meelaha ugu sarreeya ee barafku xiiran yahay Cordillera Blanca. Waxay leedahay afar meelood, oo kuwa ugu sarreeya ay gaarayaan 6369 mitir sare oo ay si dhow ula socdaan saddexda kale. Dadka buurta fuula ee dhiiri galiyay barafkan barafka leh waxay ogyihiin inay hayaan hawl aad u dhib badan taasna waxay u baahan tahay farsamo fara badan, si aad u badan oo ay ahayd oo kaliya 50s guushii lagu dhawaaqay.
Dalxiisayaashu waxay u yimaadaan barafkan barafka leh ee Peru oo ka yimaada magaalada Huaraz, buurta hoosteeda, iyo dalxiisyo badan ayaa la sameeyaa safarada buuraha. Tusaale ahaan waad sameyn kartaa safar baaskiil buur oo ah maalin dhan oo kugu qaadanaysa inaad ogaato halka loo yaqaan 'Rajucolta Creek' iyo lagoonkeeda iyo jooggeedu yahay afar kun oo mitir. Haddii aad rabto inaad gasho jardiinada qaranka waa inaad lacag bixisaa.
Runtu waxay tahay in kuwani ay yihiin uun qaar ka mid ah waxa loogu yeero buuraha barafka ku faafay ee Peru. Waxaa jira buuro baraf badan oo weligeed ah oo ku waara Peru, in kastoo ay run tahay in waxyaabaha ugu cajiibka badan ay umuuqdaan inay ku urursanyihiin waaxda Ancash.
Haddii aad jeceshahay isboortiga buuraha oo aad u baahan tahay aragtidaas adduunka ee kaliya lagu gaari karo mid ka mid sare, markaa Peru ayaa ku sugeysa.
Huayna Picchu, khasnad dalka Peru
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Maxaa la arkaa » Nevados ee Peru
Waa hagaag maxaan dhihi karaa, peru-keena waxaa ku yaal muuqaal dabiici ah oo qurux badan oo lagu ogaan karo….
Ku jawaab yeni
Waa wax aad u qurux badan oo aan ugu mahad celinayo in aan ku guuleystey shaqadii guriga ee fasaxa ahayd .. Diego leandro el Cuero
Ku jawaab diego leandro
Waa wax aad u cajaa'ib leh dhammaan barafka barakaysan ee Peru waxyaabaha waa weyn ee dalkeennu haysto
Ku jawaab katherin
sidee tihiin niman yahow
Waa wax aad u qurux badan waana ku mahadsan tahay inaan awoodo inaan naftayda ka helo darajo wanaagsan dugsigayga
Ku jawaab frank
ciise santiago dijo
aad ayaan ugu mahadcelinayaa taas oo aan u awooday inaan si wanaagsan u guto shaqadayda
Jawaab ciise santiago
mahadsanid qabow, waad ku mahadsan tahay wax walba
c fiican noqo waadna ku mahadsan tahay inaad iga caawisay hawshaydii ……
Hagaag waxaan rabaa inaan kuu sheego in mahad dhamaanteena aan ogaan karno oo aan qaban karno shaqadeena guriga sidoo kale waa mid aad muhiim u ah in laga ogaado dhamaan buuraha barafka leh ee Peru, aad ayaad u mahadsan tihiin !!!!
Ku jawaab anie shteffany ruiz mejia
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii qof i siin karo qiimayaal badan ama ka yar marin I geeyay inaan ku ogaado mid ka mid ah buuraha barafka aan kor kusoo sheegnay.
jeniffer rivera dijo
ai peru markii aan wada qurux badneyn
waa waxa ugu fiican ee jiri kara
nda in wadamada kale monsezasos.
Waan ku jeclahay Peru
Ku jawaab jeniffer rivera
jimmy jamirly dijo
Mawduucu aad ayuu u wanaagsan yahay k ayaa laga helaa halkan laakiin waa mid aad u liita
waa inay ku daraan faahfaahin dheeraad ah PERU ma jiraan waxyaabo badan oo laga helo is. Fadlan, ka bood boodka
Jawaab Jimmy Jamirly
Way fiicantahay hada inaan qaban karo shaqadeyda guriga, waa wax weyn. MAHADSANID
Ku jawaab dayanna
Hagaag, Peru waxay leedahay buuro baraf aad u qurux badan, inkasta oo aanan halkaa ka soo bixin, haddana waxay u muuqdaan kuwo aad u qurux badan.
Waa wax aad u yyyyyyyyyyyyy ganaax laakiin waxaan dhahaa wax aan jeclahay geraldinnn
Ku jawaab jhonatan
qq liindo unnoz ka eztoz diaz iire !!! : 3
Ku jawaab claudiitha
sidee boggu ufiican yahay …… ..
Ku jawaab sara
bog aad ufiican
Ku jawaab wendy
Bog wanaagsan, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aad ku lee dahay meelaha dhaadheer ee barafka ama ugu yaraan haddii ay yihiin ku meel gaar
Ku jawaab Patrick-7
Gloria Estefany dijo
waad ku mahadsantahay sameynta boggan cheverrreeeeeee
Ku jawaab gloria estefany
waan jeclahay greta velarde
Kuwani waa kuwa baraf leh oo ay tahay inaad ku darto liiskaaga haddii aadan weli booqan dhammaantood.
Buuraha barafka leh ee Peru waxaa sifiican looga qadariyo aagagga nolosha, oo aan laga taagin meel baraf ah ama baraf, tani waa sida ay dadka reer Peru iyo adduunka oo dhamiba u qadariyaan. Waxaa loo arkaa inaysan aqoon lafaha maraakiibta ee Ancash ama Switzerland ee Cusco oo leh Nevado Wacaywillque iyo hareeraheeda Piuray iyo Huaypo. Taasi waa habka lagu qadariyo, loo daryeelo loona ilaaliyo buuraheena barafka wata.
Waxaan hayaa shaqo guri oo wanaagsan
Ku jawaab pierina
Si fiican ayaan u qabtay hawsha buugga
angel mauricio dijo
Hagaag, waxbadan kama aqaano kuwan, laakiin waxay iila muuqdaan kuwo xiiso ii leh, in kastoo aan dareemayo khatar ku saabsan iyaga, laakiin waxaan jeclahay wax kasta oo ay tahay inaan isku dayo noloshan, sidoo kale, tan ugu dhow barafka barafka.
Ku jawaab malag mauricio
Ku safridda Yurub dariiqa jacaylka ee Maalinta Jacaylka
Getaways ee Maalinta Jacaylka